Ibhasiki evela kwiiphepheni zephephandaba zebhasikidi: inyathelo ngesinyathelo, kunye neefoto nevidiyo, kubaqalayo
Ukubeka ibhasikidi yamaphebhu epapasho
I-Needlework yinto enkulu yokuzilibazisa eyenza ukuchitha ixesha kungekhona nje kuphela, kodwa nangenzuzo. Unokwenza izinto ezintle wena okanye indlu, engenakufumaneka kwivenkile. Ngoku ukugcoba iibhasikiti ezivela kumaphepheni epapasho kuyathandwa kakhulu. Iphepha libhekwa njengento efanelekileyo kwaye ifikelelekayo, ngoko kungcono kubaqalayo ukuba bayisebenzise, ​​kunokuba umthi womdiliya. Kwimibuzo yendlela yokwenza ibhasikidi yamaphephandaba, akukho nto inzima. Kwanele ukuqonda umgaqo, ngoko ukwenza iimveliso ezahlukeneyo.
I-Basketball yamaphebhu epapasho ngezandla zabo
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza umkhiqizo, kuya kufuneka ulungiselele izinto. Ungasebenzisa iphepha eliqhelekileyo le-A4, kodwa kufuneka kuqatshelwe ukuba likhulu, ngoko kuya kuba nzima ukusebenza nalo. Okukhethwa kukho kukufumana iphepha lokubhala, kuba lilungele ukulipenda. Kodwa, ukuba akukho thuba lokuthenga le ngcaciso, ngoko unokuthatha iphephandaba elilula. Kufuneka igalelwe kwiimitha ezi-10 cm.
Kulo mgca kufuneka ubeke into yensimbi njengengaliti yokubamba. Emva koko, ungaqala iphepha ngokukhawuleza. Ubunzima bomnye umgca kwaye omnye umele ube malunga okufanayo. Ukufumana ityhubhu ebangelwayo ayinakuguqulwa, kuya kufuneka udibanise umda womgca uze ulungise i-angle. Ngendlela, ungasebenzisa i-adhesive. Cinga malunga nama-tubes angama-50. Ubungakanani buxhomekeke kwinkimbinkimbi kunye nobukhulu bomsebenzi.
Kubalulekile! Ukuba uya kupenda iphephandaba, oko kungcono ukusebenzisa i-lacquer yama-acrylic. Ngenxa yoko, iibhulozo aziyi kuba nzima kwaye zibuhlungu.
Emva koko, unako ukuqhubela phambili kwinkqubo yokwenza. Unokufumana i-oval, i square okanye nayiphi enye ibhaskiti.
Ukususa kwiibhulo zamaphephandaba: kwiklasi yeklasi
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufaka iibhasikiti, kodwa kucetyiswa kubaqalayo ukuba bafunde ezimbini ezilula. Ngosizo lwabo unokwenza umkhiqizo wephephandaba elihle ngezandla zakho, kwaye akudingeki uhlupheke ngexesha lokuvelisa. Ukuqeqeshwa kwiklasi yekhosi kuyakunceda. Ukugaya okuluhlaza kuyindlela eqhelekileyo enokusetyenziswa ngayo. Ukulungiselela isethi seendonga, kuyimfuneko ukuba inani lamatsha lilingane nenani lamakholomu. Kuya kufuneka ukuba wenze umgca wokuqala ngomtya, uze utshintshe iibhubhu kwindawo kwaye uyibeke nge-clothespin. Ngoku kufuneka uwubuyise kwindawo ephawulwe kwaye uyibuyisele kwi-rack elandelayo. Iibhubhu ngokwazo kufuneka zongezelelwe ngabanye, zixube. Qhubeka ude umveliso uqedile.
Ukukhwela, i-pigtails idinga iipulules ezincinci ezinomsolo, kuba zihamba kakuhle kwaye zibhetele. Le ndlela ilungele ukuguqa, kuba kukubulela kuye kuba yi-volumetric. Kunceda ukuzisa into kwimveliso. Kufuneka uqalise uboya xa inxalenye ephambili yomsebenzi sele igqityiwe. I-stoyechku yokuqala kufuneka igobe njengesithombeni, kwaye yinto efanayo ukuyenza kunye nommelwane.
Okwesibini ukugoba ukuya kwisithathu, kwaye uphinde wenze isenzo kuze kube yilapho ama-racks ayeka. Iibhubhu ngaphakathi kwemveliso kufuneka ziphendulwe ngaphandle. Ukwenza oku, thatha enye i-rack uze uyiqhubele kwinqanaba elilandelayo:
Ekugqibeleni, unqumle iziphelo uze uwagobe ngaphakathi. Ukuze kuthembeke ngakumbi, kufuneka bathathwe kwaye bahlolwe. Yonke into.
Ifoto kunye nevidiyo yeenkqubo zokuloba ibhasikidi
Ukukhupha ibhasikidi ende, kufuneka udale umdiliya. Ukwenza oku, qhagamshela iibhulo ngolu hlobo lulandelayo: umgca onqabileyo kufuneka ufakwe kwi-thick one, uze uqine. Ukuba unqwenela, kunokwenzeka ukuba usasaze umnxeba omncinci ngeglue.
Okokuqala udinga ukunyathela ngamanyathelo wenze phantsi. Kwiphepha lebhodibhodi, sebenzisa i-glue uze unamathele amathubhu kuwo. Isangqa sesibini sifanele sigcobe ngeglue kwaye sibekwe phezulu kwiphepha lamaphephandaba. Iifaki kufuneka ziphakanyiswe kwaye zifakwe ngebhanki yerabha. Kwinqanaba elingaphandle, omnye umzobo uyadingeka. Unokubeka ibhasikidi kwinqanaba elinye. Ukwenza oku, kufuneka unamathele intonga apha ngasezantsi kufuphi nantoni na. Ngoku ufanele uthathe umzobo weebhasiki. Kuyakwazi ukusebenzisa i-can okanye ibhokisi lesikwere. Emva koko, kuyimfuneko ukuphakamisa zonke izithuba ukuya phezulu kwaye uzilungiselele nge-clothespin. Kule nqanaba, kufuneka bakhonwe ngamabhabhu amabini. Zifanele zifakwe kumacala ahlukeneyo, kwaye zatshintshana ngeendawo zokuhlala. Qhubeka ude ufike phezulu. Emva koko, unokwenza ukugoba njengoko kuchaziwe ngasentla. Iinkcukacha ezingakumbi malunga nokwenza ibhasikidi eboyiweyo, ungafunda kwividiyo:
Uhlobo olususwe ngumsebenzi owenziwe kumathambo
Imveliso evela kwiphephandaba ihluke kakhulu. Awukwazi nje iibhasikiti kuphela, kodwa kwakhona iifases, iifowuni zezithombe, izindlu, iifayile kunye nangaphezulu. Izwe leMasters kuphela linemisebenzi eminingi engavamile. Ukuze ufunde iingcamango ezintsha, unokwazi ukubheka umsebenzi onomdla wabanye abantu. Unomdla kakhulu ngowama-2016:
Iingcweti zezingane kwiibhotile zeplastiki
Izikhumbuzo-izikhumbuzo zoNyaka omtsha 2016 ngezandla zabo, iklasi yokufundisa, ividiyo
Ukwazi ngeenaliti ezinamaqabane ezingenamikhono zabantwana
Indlela yokwenza i-gel yehafile kunye nesepha yelwelo?
Ukwazi nge inaliti
Inkomfa yobuntwana kubantwana abaneemfuno ezizodwa
I-Popcorn nge chocolate kunye ne-caramel
Ukutya okunokulinganisela kwabantwana abakhulelweyo nabancelisayo
Oko kufuneka uyenze ukukholisa indoda
Isaladi elula yokutya
Abagqebi bemifuno kunye neembotyi
Mhle, ubumnene buso buso
Imveliso equkethe i-vitamin E
Inkqubo yesondlo yabasetyhini abakhulelweyo
Kuphi ukuphumula nomntwana wakho ngosuku
Ukutya kweentlanzi ukulahleka kwesisindo
Ukwazi abazali bakhe indlela yokuziphatha kunye nento oya kuyenza
Ndingakwazi ukusela iziphuzo zamandla
Ukwazi ukuhlinzwa ngoplastiki
Ungayinqoba njani umnqweno wokuphindezela?
Ioli ye-Avocado: ukubunjwa, iipropati kunye nokusetyenziswa kwi-cosmetology